SOO KOOBID: XUKUNKA MAXKAMADDA CAALAMIGA EE KIISKA BADDA | Onkod Radio
SOO KOOBID: XUKUNKA MAXKAMADDA CAALAMIGA EE KIISKA BADDA
b)- Kenya waxay ka bexeysaa dhammaan dhul badeedkii ay horey ugu jirtay oo hadda Soomaaliya loo xukumay.
t) – Kenya waxay Soomaaliya ku soo wareejineysaa dhammaan xogta (data) iyo macluumaadka sahaminta shidaalka iyo gaaska ee ay ka sameysay dhul badeedka Soomaaliya loo xukumay.
j) – Soomaaliya way iska cafineysaa dhammaan xadgudubyadii ay horey u sameysay Kenya, oo wax magdhow ah uma raadsan doonto muddaddii ay Kenya sida sharci darrada ugu jirtay dhul badeedka hadda loo xukumay Soomaaliya.
x)- Waxaase Soomaaliya u furan inay magdhow u doonato shirkadihii baaritaanka ka waday dhul badeedkan. Shirkadahaasi waxaa ka mid ah shirkadda ENI oo diidday inay ka baxdo dhul badeedka xitaa iyadoo og inay dacwad ka dhex socotay labada dal.